Laascaanood: Shirkadda Telesom oo Soo Bandhigtay Adeegga ILA SOCO oo siwayn Loo Jeclaystay [Daawo Video] | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Laascaanood: Shirkadda Telesom oo Soo Bandhigtay Adeegga ILA SOCO oo siwayn Loo Jeclaystay [Daawo Video]
Apr 15, 2019 - Aragtiyood
Ankara ( Kalshaale ) Shirkadda Isgaadhsiinta TELESOM oo kamid ah Shirkaddaha ugu Waawayn ee dalka ka howlgala, Islamarkaana Bixisa Adeegyo kala duwan ayaa soo kordhisay Barnaamij cusub oo loogu magac daray ILA SOCO.
Xarunta Shirkadda Telesom ee Laascaanood ayaa soo bandhigtay Adeeggan oo lagu Ogaan karo Inaad la socon kartid, Xawaaraha uu ku socda Gaadhigaaga, Goobta uu marayo, Shidaalka uu isticmaalayo iyo Guud ahaan Warbixinta ku Gadaaman Gaadhigaaga.
Adeegan ayaa inta badan lagu xidhayaa Gaadiidka Safarka u baxaya, Iyadoo Mulkiilaha gaadhigu uu Fadhigiisa kula socon karo xaalada Gaadhiisa, Iyadoona hadii la isku dayo in la dhaco gaadhiga Halkiisa uu ku damin karo.
Adeegan Casriga ah ayaa sidoo kale ah mid yarayn kara Shilalka maadama Qofka Darawalka ah Xawaaraha uu gaadhiga kuwado Toos loola socdo, Taasi oo ka Qayb noqonaysa Badbaadinta dadka ku Safraya Gaadiidka.
Kalshaale Warar sugan iyo Suugaan
Email : Kalshaale.com@gmail.com